Maxaya tahay ujeedada Trump ee booqashada Sacuudiga - BBC News Somali
Maxaya tahay ujeedada Trump ee booqashada Sacuudiga
Madaxda sacuudiga ayaa u muuqata kuwa ka cafiyay madaxwayne Trump hadalo badan oo ka soo yeeray xiligii doorashada, taasi oo ay ka mid ahayd in sacuudiga uu ka dambeeyay weerarkii 11 september 2001 lagu qaaday Maraykanka .
Waxaa ay sidoo kale madaxda sucuudiga ay iska indha tirayaan dhibatooyiinka xiligan trump ka haysta gudaha Maraykanka, waxa ayna taa badalkeeda ay diirada saarayan ninka ay u arkaan in uu yahay mid dib boorka ug jafi kara doorkii Maraykanka ee gobolka kaddib markii sida ay qabaan uu wiiqmay sanooyiinkii uu xilka hayay madaxwayne Obama .
Madaxwayne Trump ayaa inta uu ku sugan yahay sacuudiga waxa dhici doona 3 kullan, waxaa uu la kulmi doonaa boqorka sacuudigaa, madaxda wadaamada gacanka iyo ugu dambeyn hadal uu u jeedin doono hogaamiyayaasha 40 dal oo muslimiin ah.
Ajandooyiinka ugu sareeya ee kulamadani ayaa waxaa ay noqon doonaan dagaalka ka dhanka ah xagjirnimada, gaar ahaan dagaalka ka dhanka ah kooxda Daacish.
Hasa yeeshee xukuumadaha Washington iyo Riyadh ayaa sidoo kale ka wada hadli doona taageerada Iran ay u fidiso qaar ka mid ah maleeshiyaadka ka dagaalamaa gobolka .
Ajandooyiinka wadahadalada madaxwayne Trump iyo madaxda sacuudiga ka mid ma aha arrimaha xuquuqul insaanka.
Booqashada madaxwayne Trump ee Sacuudiga ayaa waxa sidoo kale lagu wadaa in ay horseedo heshiis dhanka hubka ah oo dhan in ka badan 100 bilyan oo doolarka Maraykanka ah .